Xa Ufanele Uhambise i-FAFSA kwi-College Aid?
Ekuqaleni kungcono xa ufaka isicelo samahhala soNcedo lwabafundi baseFrederal
Ukuba usebenzisa isicelo sekholeji e-United States, kufuneka ugcwalise i-FAFSA, i-Free Application kwi-Federal Student Aid. Phantse zonke izikolo, i-FAFSA iyisiseko semali-mali yokufumana inkxaso-mali. Imihla yokungeniswa karhulumente kunye neyezemfundo ye-FAFSA yashintsha kakhulu ngo-2016. Ngoku ungasebenzisa ngo-Oktobha kunokuba ulinde ngoJanuwari.
Ngexesha Nendlela yokuzalisa i-FAFSA
Umhla wokugqibela we-FAFSA ngowama-30 kaJuni, kodwa kufuneka usebenzise kakhulu ngaphambili.
Ukuze ufumane inani elona liphezulu loncedo, kufuneka uhambise isicelo sakho samahhala se-Federal Student Aid (FAFSA) ngokukhawuleza ngo-Oktobha 1 wonyaka ngaphambi kokuya kwiikholeji. Oku kungenxa yokuba ezininzi iikholeji zinikezela ezinye iintlobo zoncedo kwi-first-come, isiseko sokuqala. Iikholeji zinako kwaye ziya kukhangela ukujonga xa ungenise i-FAFSA kwaye uya kunika uncedo ngokufanelekileyo. Kwixesha elidlulileyo, abafakizicelo beekholeji abaninzi bayeka ukugcwalisa ii-FAFSA de zabo iintsapho zizalise irhafu yabo kuba ifomu licela ulwazi lwerhafu. Nangona kunjalo, oku akuyimfuneko ngenxa yeenguqu ezenziwe kwi-FAFSA ngo-2016 .
Ngoku ungasebenzisa ukubuyela kwakho kwentela yangaphambili ngaphambi kokuba uzalise i-FAFSA. Umzekelo, ukuba uceba ukufaka ikholeji ekupheleni kuka-2018, ungazalisa i-FAFSA yakho ukususela ngo-Oktobha 1 ka-2017 usebenzisa i-tax6 yakho yentlawulo ye-2016.
Ngaphambi kokuba uhlale phantsi ukugcwalisa isicelo, qiniseka ukuba uqokelele onke amaxwebhu oya kuwufuna ukuphendula yonke imibuzo ye-FAFSA .
Oku kuya kwenza inkqubo iphumelele ngakumbi kwaye ingakhathazeki.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iikholeji ezibonelela ngoncedo lweziko kaninzi ziya kufuna ukuba ufake iintlobo ezahlukeneyo ngaphezu kwe FAFSA. Qiniseka ukuba uhlolisise iofisi yoncedo lwezezimali zesikolo ukuba wazi kakuhle ukuba zeziphi iintlobo zoncedo ezikhoyo kunye noko ungakwenza ukuze uzuze.
Ukuba ufumana naziphi na iinkcukacha zenkcazelo ekholejini yakho enxulumene noncedo lwemali, qiniseka ukuba uphendula ngokukhawuleza kunokwenzeka. Oku kuya kukunceda ukuba ufumane inani elona likhulu loncedo lwezemali kwaye ufumana ngexesha. Ukuba unemibuzo, unganqikazi ukuqhagamshelana neofisi yoncedo lwezezimali zesikolo sakho.
QAPHELA: Xa ungenise i-FAFSA, qiniseka ukuba uyithumela kulo nyaka ochanekileyo. Ngokuqhelekileyo, abazali okanye abafundi baya kuba neengxaki emva kokuthumela ngengozi i-FAFSA kunyaka wesikolo esingalunganga.
Qalisa kunye nesicelo sakho kwiwebhusayithi ye-FAFSA.
IiNkcazo zokuSetyenziswa koMbuso ze-FAFSA
Nangona umhla wokugqibela we-FAFSA wokufakela i-FAFSA ngowama-30 ku-30, imithendeleko yexesha eliqhelekileyo lihlala lide kakhulu ngasekupheleni kukaJuni, kwaye abafundi abayeka ukufakela i-FAFSA banokufumanisa ukuba abavumelekanga kwiintlobo ezininzi zoncedo lwemali. Itheyibhile engezantsi inikezela isampula yexesha elithile lombuso, kodwa qiniseka ukujonga kwiwebhusayithi ye-FAFSA ukuqinisekisa ukuba unolwazi olusesikhathini esiphezulu.
Isampula ze-FAFSA Deadlines
Alaska Izibonelelo ze-Alaska zemfundo zinikezelwa kungekudala emva kwe-Oktobha 1. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
Arkansas Imingeni yezemfundo kunye neNkxaso yeMfundo ePhakamileyo ineeNkcazo ze-Juni 1.
California Zininzi iinkqubo zephondo zinexesha elidlulileyo le-2 kuMatshi.
Connecticut Ukuqwalasela phambili, ngenisa i-FAFSA ngoFebruwari 15.
Delaware Aprili 15
Florida Meyi 15
Idaho Umhla wokugqibela ka-Matshi we-Grant's Grant Grant
Illinois Hambisa i-FAFSA kungekudala emva kwe-Oktobha 1 kunokwenzeka. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
E-Indiana Matshi 10
EKentucky Kungekudala emva kwe-Oktobha 1 kunokwenzeka. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
Maine Meyi 1
EMassachusetts Meyi 1
EMissouri Ngo-1 kuFebhuwari ukwenzela ukuba kuqwalaselwe kuqala Izicelo zamkelwa ngo-Apreli wesi-2.
North Carolina Kungekudala emva kwe-Oktobha 1 kunokwenzeka. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
South Carolina Kungekudala emva kwe-Oktobha 1 kunokwenzeka. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
State Washington Kungekudala emva kwe-Oktobha 1 kunokwenzeka. Amabhaso ayenziwe de kubekho imali iphela.
Ezinye iimithombo zoNcedo lwezeMali
I-FAFSA ibalulekile malunga nawo onke amajelo e-state, federal, kunye namaziko emali. Qhubeka ukhumbule, nangona kunjalo, ukuba kukho izigidi zeedola zemali yeengxowa-mali zekolishi ngaphandle apho zinikezelwa yimibutho yabucala. I-Cappex yinkonzo ekhululekayo yamahhala apho unokufumana imifutshane yemigangatho yemigangatho evela kwi-$ 11 billion kwiibhaso. Ungaphinde uphendule kwiintlobo ezininzi zekholeji apha.
Uncedo lwezeMali kunye nokulahlekelwa kweNgeniso
Iyini i-Alley Oop kwiBhola yeBhola?
Indlu yeFaun ePompeii - Indawo yaseRichest yokuhlala yasePompeii
Funda Ukusebenzisa Ixesha Elizayo leSpanish